Yohane 15 NA-TWI - Yesu na ɔyɛ nokware bobe no - “Mene - Bible Gateway
Yohane 14Yohane 16
Yohane 15 Nkwa Asem (NA-TWI)
15 “Mene nokware bobe no na m’agya ne okuafo no. 2 Dubaa biara a ɛnsow aba no, otwa kyene, na dubaa biara a ɛsow no, oyiyi ho na asow aba bebree. 3 Me nsɛm a maka akyerɛ mo no ama mo ho afi dedaw. 4 Montena me mu na me nso mentena mo mu. Dubaa biara ankasa rentumi nsow aba gye sɛ ɛfam ne dutan ho. Saa ara nso na morentumi nsow aba gye sɛ mote me mu.